खोटाङमा चट्याङप्रतिरोधी उपकरण जडान, कसरी काम गर्छ? « Kakharaa
खोटाङमा चट्याङप्रतिरोधी उपकरण जडान, कसरी काम गर्छ?
गाउँपालिकामा जडान गरिएको चट्याङप्रतिरोधी उपकरणले ८०० मिटर टाढा खसेको चट्याङलाई आफूतर्फ तानेर जमीनभित्र निस्क्रिय (डिसपोज) गर्ने गाउँपालिका प्रमुख कृष्णकुमार राईले बताए । ‘चट्याङले यस क्षेत्रमा बर्सेनि मानिस तथा पशुचौपायामा ठूलो क्षति गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा चट्याङबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न चट्याङप्रतिरोधी उपकरण जडान गरिएको हो ।’
भौगालिकरूपमा दुर्गम क्षेत्र मानिने पूर्वीपहाडी जिल्ला खोटाङ चट्याङको अतिप्रभावित जिल्लामा पर्दछ । चट्याङले जिल्लामा सञ्चालित दुई रेडियो (रुपाकोट सामुदायिक रेडियो र हलेसी सामुदायिक रेडियो)मा बर्सेनि लाखौँको क्षति पुर्‍याउने गरेको रेडियो सञ्चालकले बताउँदै आएका छन् ।
चट्याङकै कारण उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेपछि अहिले रुपाकोट सामुदायिक रेडियो बन्द रहेको छ । ऋण काढेर जडान गरिएको उपकरणमा चट्याङले बर्सेनि क्षति भएपछि रेडियो सञ्चालक हैरानीमा पर्दै आएका छन् । चट्याङले निरन्तर क्षति पुर्‍याएपछि यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलास्थित महुरेका स्थानीयवासीले भने आफ्नै लगानीमा उपकरण खरीद गरेर प्रत्येक घरमा अर्थिङ गरेका छन् ।